ALAPAHA BLUE BLOOD BULLDOG DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Alapaha Blue Blood Bulldog Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Van Furth the Alapaha Blue Blood Bulldog oo halkaan lagu muujiyey isagoo qaangaar ah 2 sano jir ah, sawir qadarin leh Alapaha Connection Kennels oo ka yimid khadka asalka ah ee Lana Lou Lane
Liiska Alapaha Buluugga Dhiiga Bulldog Isku Darka Eeyaha
Alapaha Bulldog Bulldog waa bulldog si fiican u horumarsan, la buunbuuniyey oo leh madax ballaaran iyo dhagaha dhibic dabiici ah. Xuubka caanka ah waxaa daboolaya bushimaha sare ee dabacsan. Indhaha muuqda ayaa si fiican loo kala saaray. Jaakada Alapaha waa mid gaaban oo cadaalad adag. Midabada la doorbiday waa merle buluug ah, meeris bunni ah, ama meeris cas oo dhammaantood lagu jarjaray caddaan ama shukulaato iyo caddaan. Sidoo kale waxaa doorbidaa indhaha muraayadaha ah (buluug) ama indhaha marmarka (bunni iyo buluug isku qasan hal isha). Dhegaha iyo dabadu weligood lama jarin ama lama xirayo. Jidhku waa adag yahay oo muruq badan yahay. Miskaha miskaha si fiican u muruqsan ayaa ka cidhiidhsan laabta. Dhabarka toosan waa inta eygu sarreeyo garbaha. Digriiga waligiis lama tirtiro cagihiisuna waa u eg yihiin bisad.
Alapaha Blue Dhiig Bulldog waa waajib iyo si dhakhso leh loo tababaran karo. Noocani waxaa loogu magac daray sidan oo kale 'boqortooyo'. Waa waardiye weyn iyo eey waardiye ah. Waxay u dagaallami doonaan dhimashadooda si ay u difaacaan milkiilayaashooda oo ay u sameeyaan eeyo wehel u ah. Aad u fiican oo leh ilaalin carruurta. Kuwani waa eeyo firfircoon, isboorti iyo maskax leh oo wadno badan leh. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaadho xaalad hoggaamiye xidhmo . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo xirmadooda . Markaan aadane la noolaano eeyaha, waxaan noqonaa xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeeysaa hal khadadka hogaamiyaasha si cad ayaa loo qeexay. Adiga iyo dadka kale oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karaa guul dhammaystiran.
Dhererka: 24 inji (61 cm)
Miisaanka: Ragga ilaa 100 rodol (47 kg) Dheddigga qiyaastii 78 rodol (34 kg)
Farqi weyn ayaa u dhexeeya labka iyo dheddigga. Ragga waxay noqon karaan ku dhowaad laba jibaar ka culus kan dumarka ugu yar.
Iyada oo leh barkad yar oo hidde ah, dhibaatooyinka caafimaad sida u rogitaanka baalasha indhaha (entropion) ayaa horumarin kara.
Alapaha Blue Blood Bulldogs waxay ku fiicnaan doontaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu gudaha kuma jiraan firfircooni waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
Kuwani cayaaraha, eeyaha firfircoon waxay leeyihiin celcelis ahaan dalab jimicsi. Waxay u baahan yihiin socod dheer maalinle ah oo wuxuu ku raaxeysan doonaa rooti aag xero ammaan ah.
madow iyo caddaan brindle pitbull
Qiyaastii 4-8 eyyo
jiir terrier shih tzu mix
Is qurxin yar ayaa loo baahan yahay. Mararka qaarkood shanlee oo caday si aad timaha dhintay uga saarto una yareeyso daadinta. Maydho labadii toddobaadba mar. Noocani waa celcelis daadiya.
Alapaha Blue Dhiig Bulldog wuxuu ka yimaadaa seddex jiil oo ah barnaamij taranta hore ee PaPa Buck Lane ee Rebecca, Georgia, USA. Barnaamijku wuxuu dib u bilaabmay 1800-yadii waxaana loogu talagalay in lagu badbaadiyo 'eeyga dhirta' ee koonfurta Georgia oo ku dhowaa bakhtiyey . Eygan ilaalada ah ee nooca bulldog-ka ah ayaa soo degaya qaabka Eyga Buck Lane ee loo yaqaan Otto. Lana Lou waxay ka hadashay awoowe iyada oo had iyo jeer lahayd 'Otto' wax ku saabsan dhismaha. Hal Otto mid baa loo wada wada baahnaa maxaa yeelay Bulldogs-kani waxay awood u lahaayeen shaqada ilaalada iyo hawdka inay shaqeeyaan. Markii PaPa Buck tareen lagu dilay 1943, Otto wuxuu cadeeyay cibaado la’aantiisa booqashada joogtada ah iyo waajibaadka qabriga. Buck Lane oo ay ayeeyo u tahay, Lana Lou Lane ayaa sii waday barnaamijkii taranka ilaa ay ka dhimatay hurdadeedii bishii Luulyo 20, 2001. Sida Plott Hound, noocyada muruqyadu waa abuuritaanka hal qoys oo Mareykan ah, badbaadintiisuna waxay ku xiran tahay kobcinta ay hesho. Asal ahaan ka soo jeeda kaydka Ingiriisiga Bulldog, aabayaashood aabayaashood waxay u shaqeyn jireen xoolo dhaqatada iyo doofaarka, laakiin Alapaha Blue Blood Bulldog waxaa loogu talagalay kaliya amniga iyo wehelnimada. Hay'adda Cilmi-baarista Xayawaanka (ARF) waxay ahayd diiwaangelintii ugu horraysay ee nooceeda ah ee abid aqoonsata marwo Lana Lou Lane 'Alapaha Blue Blood Bulldogs' sanadkii 1986. Ms. Lane waxay ahayd ARF Certified Breeder ilaa iyo intay marayso 2001, kadib waqtigaas oo hooyadeed oo waayeel ah, Mrs. Vivian Lane, ay la wareegtay howlaheeda ganacsi. Markii dambe, Mrs. Vivian Lane waxay iibisay aqalkeedii gabadheeda.
ABBA = Alapaha Buluug-Bulug Bulug-Bulug
WWKC = Naadiga Kennelka Wide World
Sugar, ABBA ah oo diiwaangashan Alapaha Blue Blood Bulldog — Waxaa iska leh Asylum Angel Bulldogs
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah Bulpaog Dhiig Buluug ah oo loo yaqaan 'Alapaha Blue Blood Bulldog'
Alapaha Blue Dhiig Bulldog Sawirro 1
Alapaha Blue Dhiig Bulldog Sawirada 2
Alapaha Blue Dhiig Bulldog Sawirada 3
4 bilood jir ah boston terrier
adhijirka reer german ee isku dhafka eeyaha
shih silig SUNTZU isku darka Pit timaha
dachshund iyo chihuahua sawiro isku dhafan